Himalaya Dainik » उसले निकै प्रयास गर्यो तर मैले दिइन ….
उसले निकै प्रयास गर्यो तर मैले दिइन ….
पाेखरा, बाँकेको नेपालगन्ज–६ फुल्टेक्रा स्थित एक सामुदायिक विद्यालयबाट घर जाँदै गरेकी १५ वर्षीया ती किशोरी माथि भएको घटनामा किशोरीले अझै न्याय पाएकी छैनन् । उनलाई वाटोमै जबरजस्ति करणी प्रयास भएकाे थियो । उनले प्रतिरोध गर्दा झन्डै मृत्युको मुखमा पुगिनन् ।
घटना भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि उनी बोल्न नसक्ने अवस्थामा छिन् । पिडित किशोरीका अभिभावकका अनुसार, नेपालगन्जस्थित बसपार्क रोडको एउटा होटलमा लगेर करणी योजना बनाएका २१ वर्षीय युवाले विद्यालयबाट फर्कंदै गरेकी ति किशोरीलाई दिउँसै धम्की दिएका थिए ।
‘मसँग चुपचाप नहिंडे यहीं मा रिदिन्छु भ’नेर एक हा’तले क्घा ‘टीमा स’लभि’त्रबाट’ ब्ले’ ड रा’ख्यो, अर्को हा’त स’माते’पछि म बो’ल्नै स’किंन,’ स’रासर’ होटलमा ल’गेर कर णी प्र यास गरेको सम्झँदै किशोरीले भनिन्, ‘कुनै हालतमा न’दिए’पछि मेरो यस्तो अवस्था बनाए । ला /त्ती ले निरन्तर अ’नु’हार’मा हा/ ने ।
उनीहरु किशोरीको मृत्यु भयो भन्ने सोचेर त्यहाँवाट हिँ’डे । किशोरीको भनाइ थियो ‘पछि हो स् खुलेपछि रो ए को सुनेर होटलवाला आएर अस्पताल पु¥याए ।’ माघ १६ गते शुक्रवार, शीतलहर, हुस्सु र कुहिरोले ढ’पक्क ढा केर एकाबिहानजस्तो ला्ग्नेर्र त्यो दिन सम्झँदै किशोरीले भनिन्, ‘नजिकैको मानिसपनि नदेखिने अवस्था थियो । हात समातेर आफन्तले घरतिर लगेजस्तै मलाई डो’र्याउँदै होटल लिएर गए ।
तीन दिन अघिमात्रै किशोरीकी आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा कि टा नी जाहे री दिएको भएपनि उनले न्याय पाएकी छैनन् । नेपालगन्जको स्थानिय मिडिया दैनिक नेपालगन्जमा पुगेकी किशोरीकी आमाले भनिन्, यति ठूलो घटनामा प्रहरीले आफै अनुसन्धान गर्छ भन्ने सोचेकी थिए तर तीन दिन अघि प्रहरी कार्यालय जाँदा सम्म पनि केही भएको रहेनछ । अहिले कि टा नी जा हे री दिएर आएकी छु ।
यो पनि : २ बर्षदेखि प्रेममा इन्दिरा जोशी, को हुन उनका प्रेमी ?
हालै गायिका ईन्दिरा जोशीले फेसबुकमा आफ्नो प्रेम सम्बन्धबारे खुलेकी छन्। उनले आफू दुई वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलाएकी हुन्।